Liverpool Oo Doonaysa Xiddiga Aguibou Camara Ee Qadka Dhexe Uga Ciyaara Olympiacos
HomeWararka CiyaarahaLiverpool oo doonaysa xiddiga Aguibou Camara ee qadka dhexe uga Ciyaara Olympiacos
October 8, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Liverpool ayaa ku dartay liiskeeda xiddiga qadka dhexe ee Olympiacos Aguibou Camara , sida wararka ay sheegayaan.
20 jirkaan ayaa xagaagan uun kaga soo biiray kooxda Giriigga kooxda Lille, laakiin wuxuu durba soo jiitay indhaha kooxaha waaweyn.
Xidigan ayaa Awood u leh inuu ka ciyaaro dhexda dhexe ama dhanka midig, Camara wuxuu leeyahay laba gool 10 kulan oo uu saftay tartammada oo dhan xilli ciyaareedkan.
Warsidaha Giriigga ee Spor Time ayaa sheeganaya in Liverpool ay aad ula dhacday oo ay si dhow ula socoto da’yarka.
Warka ayaa intaas ku daraya in Reds ay ka mid ahayd tiro kooxo ah oo indha -indheeyayaal ahaa kulankii Olympiacos ee Europa League oo ay la ciyaareen Fenerbahce bishii hore, markaasoo Camara uu soo bandhigay qaab ciyaareed aad u xooggan.
Intaa waxaa sii dheer, in Liverpool ay xiriir wanaagsan la leedahay kooxda heysata horyaalka Giriigga, taas oo gacan ka geysan karta in heshiis la gaaro.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa afar kulan u saftay xulka qaranka Guinea, isagoo hal gool u dhaliyay xulkiisa.